I-studio epholileyo enamagumbi ama-2 embindini kufutshane neSikhululo
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguЕлена
Ifulethi elipholileyo elinokulungiswa kwale mihla kumbindi wesixeko, kufutshane nesikhululo sikaloliwe, iRed Torch Theatre, eSt. Lenin. Indawo efanelekileyo yendlu yenza kube lula ukuya kuyo zombini ngemoto kunye ne-metro kunye nezithuthi zikawonke-wonke. Ifulethi linayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale ukhululekile: ibhedi ephindwe kabini kunye ne-orthopedic mattress, ibhedi yesofa kunye nesitulo sengalo. I-air conditioning ifakwe ekhitshini-igumbi lokuhlala. Nandipha ukuhlala okunesitayile kumbindi wesixeko.
Le ndlu inegumbi lokulala elahlukileyo apho kukho ibhedi ephindwe kabini kunye ne-orthopedic mattress, i-wardrobe yesibuko esikhulu, amakhethini amnyama kwiifestile.
Ikhitshi idityaniswe negumbi lokuhlala, kodwa inomda ocacileyo. Kwigumbi lokuhlala kukho i-sofa ebanzi, apho, ukuba kuyimfuneko, inokwandiswa kwaye ifumane ibhedi epheleleyo ye-2, kunye ne-armchair-bed.
Kwindawo yasekhitshini uya kufumana yonke into oyifunayo ukupheka: izitya, i-cutlery, i-hob, i-microwave, i-extractor hood, ifriji evulekile.
Indawo yokutyela ibandakanya itafile enokuthi ivuleke ngokulula xa kuyimfuneko, izitulo, i-air conditioning.
Umabonwakude omkhulu uxhonywe eludongeni ngendlela yokuba unokujongwa naphi na kwigumbi lokuhlala.
Indawo yokusebenzela ibandakanya itafile, isibane kunye nesitulo. Itafile ihamba ngokulula kwaye inokuhanjiswa kuyo nayiphi na indawo efanelekileyo kwindlu.
Indlu yokuhlambela ineshawa, umatshini wokuhlamba, isinki, indlu yangasese, isibuko
Kwi-paseji kukho i-hanger yempahla yangaphandle, isibuko, i-shoehorn.
5.0 ·Izimvo eziyi-16
Kumgama wokuhamba ukusuka kwindlu kukho iikhefi, iindawo zokutyela, amaziko oshishino, amaziko okuthenga, iithiyetha, iipaki, isikhululo sikaloliwe, iimovie, iimyuziyam, i-metro, iLenin Square, iKrasny Prospekt Street, njl.
Sihlala sinxibelelana kwaye sikulungele ukuphendula nayiphi na imibuzo evela kwiindwendwe!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Novosibirsk